Haweenka Punland waa maxay caqabada ka hor taagan kamid noqoshada Baarlamaanka iyo Golaha Wasiirada ? (dhegayso) – Radio Daljir
Febraayo 12, 2019 9:14 b 0
Xukuumadihii kala duwanaa ee Puntland soo maray dumarku kaalin mugleh kuma aysan lahayn siyaasada Puntland siiba dhanka Gole yaasha dowladda, Baarlamaanka iyo Golaha Wasiirada ee cusub .
Caqabada ugu wayn ee hor taagan ayay haweenku ku sheegeen in ay tahay odayaasha dhaqanka oo nidaamka wax ku qaybsiga beelaha ku soo xula xubnaha u matalaya siyaasada iyagoo uxaglinaya dhinaca Raga .
Hadab sidee caqabadaasi uga gubki karaan haweenka Puntland? Su,aalahaas iyo kuwo kale waxaan hor dhignay Guddoomiyaha Ururka haweenka ee gobolka Bari Maryan Gaduudo .
wariye Xasan Heykal ayay uranatay .